​राजनीति र मौद्रिक अन्यौलताले यो साता बजारमा सामान्य गिरावट, कारोबार रकम भने बढ्यो
Saturday, 16 Jul, 2016 11:01 AM
१ असार काठमाडौ । राजनीतिक अस्थिरता, मौद्रिक नीतिको अन्यौलता लगायतका कारण यो साताभरमा सेयर बजारमा केही गिरावट देखिएको छ । पछिल्ला केही सातादेखि निरन्तर बुम बनिरहेको बजारमा यो साता भने सामान्य गिरावट देखिएको हो । साताको अन्तिमतिर मौद्रिक नीति आएपछि लगानीकर्ताभने उत्साहित देखिएका छन् । मौद्रिक नीतिमा बजार उथल पुथल पार्ने नीति नआएपछि लगानीकर्ता ढुक्क देखिएका छन् । साताभरमो नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ४.३८ अंकले घटेर अन्तिम दिन १७१८.१५ अंकमा आइपुगेको पुगेको छ । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १ सय ५९ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । जस अनुसार २६ हजार ९४ कारोबारबाट ६ अर्ब चार करोड ६८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरका एक करोड एक लाख ६७ हजार नौ सय ४० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ० दशमलव ७८ प्रतिशत बढि हो ।
गत साता १ सय ४७ कम्पनीहरुको कारोबार भएको थियो । जस अनुसार २४४३३ कारोबारबाट छ अर्ब एक करोड २८ लाख छ हजार रुपैयाँ बराबरका ९९ लाख ६० हजार चार सय ३० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका थिए । यो साता ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पहिलो दिनको तुलनामा २.४९ अंकले घटेर ३६९.०७ अंकमा आईपुगेको छ । यस साता कारोबार रकम ( २७ करोड ५४ लाख ६० हजार रुपैयाँ) को आधारमा एभरेस्ट बैंक लि. अग्रस्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्या (१२ लाख ३२ हजार कित्ता) को आधारमा सिद्धार्थ इक्विटी ओरिएन्टेड स्किम अग्रस्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी कारोबार संख्या (१२२२ वटा) को आधारमा जनता बैंक नेपाल लि. अग्रस्थानमा रहेको छ । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार कक्ष नियमित कारोबारका लागि पाँच दिन खुला रह्यो । यस साता पनि ऋणपत्रतर्फ संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरुको कुनै पनि कारोबार भएन ।